Navoaka ny kinova azo antoka voalohany an'ny Guix 1.0 ary ireto ny vaovaony | Avy amin'ny Linux
Taorian'ny asa mafy 6 taona mahery sy kinova 19 navoaka, ny ekipan'ny Nix dia nanambara ny famoahana ny kinova miorina voalohany avy amin'ny manager manager. Ho an'ireo mpihazona tetikasa, Guix 1.0 manana tombony maro miavaka izy io.
Amin'ny haavon'ny mpampiasa, Hanamora ny fametrahana ny rindrambaiko ny Guix ary hitazona anao havaozina amin'ny alàlan'ny fampiasana baiko isan-karazany toy ny fikarohana guix hahitanao ilay rindrambaiko, apetrakao guix hametrahana azy ireo, hisintona ny guix ary hanatsara ny fanavaozana azy ireo tsy tapaka.
1 Momba an'i Guix
2 Ny zava-baovao ao amin'ny Guix 1.0
3 Ampidino ny Guix 1.0
Momba an'i Guix
Tamin'ny 2012, nivory tao Düsseldorf, Alemana ny vondron'ireo mpijirika avy amin'ny fizarana GNU mba hanolotra tetikasa vaovao izay nanomboka niasan'izy ireo. Ity tetikasa ity dia nantsoina hoe Guix, fa tononina hoe "gi: ks" miatrika ny filàna mifehy tsara ny fanaparitahana fonosana manerana ny fizarana Linux.
Amin'ny teny hafa, Guix dia mpitantana fonosana miasa tanteraka voasoratra amin'ny fiteny Scilee Guile ary mifototra amin'ny mpitantana fonosana Nix. Noho izany, Guix dia mahita rohy miaraka amin'ny paradigma an'ireo fiteny fandefasana ampiasaina amin'ny alàlan'ny fiteny Ocaml, Haskell na Scheme amin'ity tranga ity.
Ny fizarana dia tsy misy afa-tsy singa maimaim-poana ary miaraka amin'ny kernel GNU Linux-Libre, nodiovina tamin'ny singa firmware binary tsy maimaim-poana. GCC 8.3 dia ampiasaina amin'ny fametrahana.
Ankoatr'izay dia ampiasainy ihany koa ny fananganana sy ny firafitry ny fonosana madio.
Ny zava-baovao ao amin'ny Guix 1.0
Guix manaraka maodely iray fizarana ny Famotsorana Rolling, izay midika fa afaka mihazakazaka ny baiko "guix pull" ianao amin'ny fotoana rehetra hahazoana ny fanavaozana farany.
Na dia fahita amin'ny mpitantana fonosana hafa aza ity fampiasa ity, Ekipa Guix manampy endri-javatra Guix miavaka, izay ny lafiny fifanakalozana ataony.
Raha ny tokony ho izy dia midika izany fa ny mpampiasa dia afaka mampiasa ny Guix amin'ny fotoana rehetra mba hiverenany amin'ny kinova fonosana teo aloha amin'ny fizarana Linux anao mihazakazaka ny baiko "Guix -roll-back" na "guix package -l" hamakafaka ny fahasamihafana misy eo amin'ny fonosana.
Amin'ny maha tombony hafa tsy dia manandanja azy loatra, ireo mpihazona Guix dia manasongadina ihany koa ny fitomboany.
Amin'ny alàlan'ity fe-potoana ity dia tsy maintsy takatsika izany Guix dia mamela ny mpampiasa hampihatra ny tontolo iainana mitovy an'ny rindrambaiko amin'ny milina isan-karazany na amin'ny fotoana tsy mitovy noho ny "guix faritana" sy "guix pull".
Farany, tokony homarihina fa ireo fiasa rehetra ireo miaraka amin'ny manager manager tsy mila fahazoan-dàlana ho an'ireo mpampiasa, izay sarobidy indrindra, indrindra eo amin'ny sehatry ny informatika avo lenta (HPC) sy ny siansa azo averina.
Ho an'ny mpamorona dia ilaina ihany koa ny Guix satria mamela, ohatra, hamorona tontolon'ny rindrambaiko manokana.
Ary koa, raha mpamorona izy ireo izay te-hahazo valiny avy amin'ny mpampiasa azy haingana, Guix dia manome fomba tsotra hamoronana sary fitahirizana azo ampiasain'i Docker ary na arisiva mitokana aza izay azon'ny tsirairay atao amin'ny fotoana rehetra.
Etsy ankilany, raha mpandrindra rafitra ianao dia tokony hahaliana anao ny fomba fanaovan'i Guix fanambarana sy firaisan-kina amin'ny fitantanana fikirakirana.
Mba hametrahana ny rafitr'izy ireo dia afaka mampiasa rakitra fisie tokana izy ireo mba hamaritana ny lafiny rehetra amin'ny rafitry ny rafitr'izy ireo, ao anatin'izany ny serivisy, ny rafi-drakitra, ny toerana eo an-toerana, ny kaonty ary ireo rehetra ireo amin'ny fiteny rafitra iray ihany.
Araka ny ekipan'i Guix, ity dia manamora ny fametrahana ireo serivisy sarotra, toy ny fampiharana miankina amin'ny serivisy web.
Farany, ny ekipa dia mamaritra fa amin'ny baiko tokana dia azo atao ny mamorona ohatra iray amin'ny masininao, amin'ny milina virtoaly (VM), na ao anaty kaontenera iray hanaovana andrana. Ny mpandrindra ny rafitra dia afaka mamorona sary ISO ihany koa.
Miaraka amin'ity kinova Guix voalohany miorina ity dia nanambara ny ekipa tompon'andraikitra amin'ny tetikasa fa nahatratra dingana iray tena lehibe izy ary manantena fa hamela anao hanamboatra ny rafitrao lalindalina kokoa amin'ny alàlan'ny interface interface ao Guile ity ekipa tompon'andraikitra amin'ny tetikasa ity.
Ampidino ny Guix 1.0
Sary azo apetraka amin'ny USB Flash (243 MB) ary ampiasaina amin'ny rafitra virtualization (474 ​​MB) misintona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Navoaka ny kinova azo antoka voalohany an'ny Guix 1.0 ary ireto ny vaovaony
Facebook dia mitady mpamatsy vola amin'ny volany cryptocurrency ary mamindra ny rafitra TDC
Qtum dia manolotra ireo fitaovany rahona avy amin'ny Google Cloud